Bashaywe engeqiwa ntwala abadlali abadumile bebhola lezinyawo | Scrolla Izindaba
Amahora nje i-Manchester United ibisezinhlungwini zokuhlulwa kakhulu ngenkathi beshaywa ngamagoli ayisithupha kwelilodwa yi-Tottenham Hotspurs.
Umonakalo omkhulu ku-Liverpool wenziwe ngu-Ollie Watkins ofake igoli ngekhanda ngaphambi kokuthi kuphele isiwombe sokuqala- indoda yokuqala yokuthola lokhu ibhekene ne-Reds.
Usizwe ngumdlali obedlala ohlangothini uJack Grealish oshaye amagoli amabili waphinda wasiza kwamanye amagoli amathathu.
Okubuhlungu, ukuthi umdlalo omuhle kangaka we-Villa udlalwe ungabukelwe muntu enkundleni ngenxa ye Covid-19.
Lo mdlalo uyihlehlisele emuva kakhulu i-Liverpool ngoba ibivele isenkingeni enkulu kulesizini.
Kuzobakhona ukucubungulisisa kahle kubadlali abane abadlala emuva, njengoba kusukela ngeSonto bebebizwa ngabadlali abangungqa phambili emhlabeni wonke.
Kodwa i-Liverpool akusiyona kuphela emangazile.
I-Man United yona ingcono ngoba ibinezaba zokucasha: umdlali waphambili u-Anthony Martial wakhishwa ngemuva kwemizuzu eyi-28 ngokudlalisa omunye umdlali kabi, wanciphisa abadlali ukuthi babeyishumi kwaze kwaphela umdlalo.